Diode Laser 755 808 1064, CO2 Laser Jajabka - LaserTell
Cavitation-ka Cusub + RF + Mashiinka Khafiifinta Nadiifinta ...
Aragti 1. leysarka infrared wuxuu hoos u dhigaa maqaarka maqaarka adoo kululeynaya maqaarka iyo tamarta RF waxay si qoto dheer u dhex gelaysaa unugyada isku xira. Isku-darka isku-dhafka ah ee laysarka infrared iyo tamarta RF-ga la qaado waxay kordhisaa faafitaanka oksijiinta intracellular ee maqaarka kululaynta. Tiknoolajiyada faakiyuumku maqaarka isku laabto ayaa ka dhigeysa in tamarta RF ay dhex gasho maqaar isku laaban, si weyn kor ugu qaadaya saameynta iyo amniga, xitaa daaweynta aagga baalasha sare. 4. Vacuum lagu daro rollers si gaar ah loogu talagalay rooga khalkhalgelinta horseedyada xitaa RF ...
Anti-gabowga duudduub Remover Face qaadista Radar L ...
Shirkadeena waxay ku takhasustay maqaarka dumarka, si loo xaliyo dhibaatooyinka maqaarka, ha lagu badalo sharafta.
LaserTell Technologies (UK) Co., Ltd. waa hormuudka isdhexgalka kheyraadka berrinka Lasers bilicsanaanta farsamada casriga ah. Maanta, LaserTell Technologies (UK) Co., Ltd. waa hal-abuure weyn ee taageerada farsamada, adeegga iibka kadib, tababarka caafimaadka, suuqgeynta, iyo sidoo kale la talinta suuqyada qalliinka iyo bilicsanaanta.
Muddo sanado ah, waxaan isku darnaa heer hal-abuurnimo, khibrad iyo fahamka macaamiisha oo ka sarreeya tan shirkad kasta oo warshadeenna ka mid ah.
Tiknoolajiyada cusub ee Laser Timaha looga saarayo Fiber Te ...
Aragtida qaybiyaha waxay rabtay laser diode laser 980nm ...
Power High 1500W size kaalinta weyn timaha Laser Diode ...
Meeleynta guud ahaan adduunka 80 adduunka oo dhan
Alaabada Featured, Khariidadda bogga, Opt Shr Ipl Timaha Jooji, Hifu Mini, Ipl Xenon Flash Siraaj, Timo Goynta Laser Iyo Dib U Cusbooneysiinta Maqaarka, 808 Nm, Ipl Laser Shr Timo Goynta, Dhammaan Alaabooyinka Qolka 308, No.12, Jingsheng South 2nd Wadada, Degmada Tongzhou, Beijing, Shiinaha